पृथ्वीलाई कसरी स्पिन तुल्याउँछ?
के तपाईंले जान्नुभएको थियो कि पृथ्वीले जित्छ र गति बढाउँछ र कम गर्छ?
पृथ्वी सधैं गतिमा छ। यद्यपि जस्तो देखिन्छ कि हामी अझै पृथ्वीको सतहमा उभिएका छौं, पृथ्वी यसको अक्षमा कताईरहेछ र सूर्यको आराधना गर्दछ। हामी यसलाई महसुस गर्न सक्दैन किनभने यो निरन्तर गति हो, जस्तै कि हवाई जहाजमा रहेको जस्तो। हामी विमानको रूपमा उस्तै दरमा हिँडिरहन्छौं, त्यसैले हामी महसुस गर्दैनौँ कि हामी सबै मा जान्छौं।
पृथ्वी यसको अक्षमा घिमिरे के छ?
पृथ्वी प्रत्येक दिन एक पटक आफ्नो अक्ष घुमाउँछ।
किनकि भूमध्य रेखामा पृथ्वीको परिस्थिति 24 901.55 मील रहेको छ, भूमध्यस्थलमा एक स्थान प्रति घन्टा लगभग 1037.5646 माइलमा घटेको छ (1,037.5646 पटक 24 24 901.55 को बराबर), वा 1,66 9.8 कि.मी.
उत्तरी ध्रुव (90डिग्री उत्तर) र दक्षिण ध्रुव (90डिग्री दक्षिण), गति प्रभावी ढंगले शून्य हुन्छ किनभने त्यो स्थान 24 घण्टापछि एक धेरै, धेरै ढिलो गतिमा घुमाउँदछ।
कुनै अन्य अक्षांशमा गति निर्धारण गर्न, केवल डिग्री अक्षांश समय को कोणिनलाई 1,037.5646 को गति लाई गुणा गर्दछ।
यसकारण, 45 डिग्री उत्तरमा, कोसिन .7071068 हो, त्यसोभए 7071068 पटक 1,037.5464 र घिमिरे गति 733.65611 माइल प्रति घन्टा (1,180.7 किलोमिटर / घन्टा) हुन्छ।
अन्य अक्षांशका लागि गति यो हो:
10 डिग्री: 1,021.7837 मील प्रति घंटा (1,644.4 किमी / h)
20 डिग्री: 974.9747 मील प्रति घंटा (1,569.1 किमी / घंटा)
30 डिग्री: 898.54154 मील प्रति घंटा (1,446.1 किमी / h)
40 डिग्री: 794.80665 मील प्रति घंटा (1,279.1 किमी / h)
50 डिग्री: 666.92197 मील प्रति घंटा (1,073.3 किमी / h)
60 डिग्री: 518.7732 मील प्रति घंटा (834.9 किमी / घन्टा)
70 डिग्री: 354.86177 मील प्रति घंटा (571.1 किमी / h)
80 डिग्री: 180.16804 मील प्रति घंटा (28 9.95 किमी / h)
सबै केहि चक्रवात हो, पृथ्वी को रोटेशन को गति पनि, जो geophysicists सटीक, मिलिसेकेन्ड मा। पृथ्वीको रोटेशन पाँच वर्षको अवधिमा हुन्छ, जहाँ यसलाई फेरि ब्याकअप गर्न अघि बढ्न सकिन्छ, र ढिलाइको अन्तिम वर्ष संसारभरको भूकम्पमा माथि बढ्न सहज हुन्छ।
वैज्ञानिकहरूले भविष्यवाणी गरे कि यो पाँच वर्षको चिसो चक्रमा गत वर्ष भएकोले, 2018 भूकम्पको लागि ठूलो वर्ष हुनेछ। संगतता कारण होइन, निस्सन्देह, तर भौगोलिकवादीहरूले सधैं प्रयास गर्ने उपकरणहरू खोज्छन् र भूकम्प आउँदा भविष्यवाणी गर्छन्।
पृथ्वीको स्पिनमा यो थोपाको थोपा छ, जस्तै अक्ष ध्रुवीयमा डुब्छ। स्पिन 2000 बाट सामान्य भन्दा छिटो बढ्दै गएको छ, नासाले मापन गरेको छ, प्रति वर्ष7इन्च (17 सेन्टिमिटर) प्रति वर्ष बढ्दै गएको छ। वैज्ञानिकों ले निर्धारित गरे कि यो पूर्व ग्रीनल्याण्ड र अंटार्कटिका को पिघने को संयुक्त प्रभावहरु र यूरेशिया मा पानी को क्षति को कारणहरु लाई पछि को अगाडी बढाने को बजाय जारी राखयो; अक्ष बहाव 45 डिग्री उत्तर र दक्षिणमा परिवर्तन हुने विशेषतया संवेदनशील देखिन्छ। त्यो खोजले वैज्ञानिकहरूलाई अन्ततः लामो स्थानमा रहेको प्रश्नको जवाफ दिन सक्षम भयो जसले पहिलो स्थानमा बहाइयो। युरोपेलीमा सुकिलो वा गीला वर्षको कारणले पूर्वी वा पश्चिममा बगाएको छ।
पृथ्वी यात्रा कस्तो लाग्छ?
पृथ्वी को घूर्णन गति को अतिरिक्त इसके अक्ष पर कताई, ग्रह प्रत्येक 365.2425 दिन एक बार सूर्य के चारों ओर अपने प्रति क्रांति में लगभग 66,660 मील प्रति घंटे (107,278.87 किमी / घंटा) पर गति भी चल रहा है।
यो 16 औं शताब्दी सम्म पुग्यो पहिले मान्छेले बुझ्यो कि सूर्य ब्रह्माण्डको हाम्रो भागको केन्द्र थियो र पृथ्वी यसको वरिपरि घुमाईयो, बरु पृथ्वीको सट्टा र हाम्रो सौर प्रणालीको केन्द्र।
पचास राज्यों को राज्य कैपिटल
समाज विज्ञान मा भूमिका संघर्ष को परिभाषा
केमिकल रिएक्शन र रासायनिक समीकरण बीचको भिन्नता के हो?
एकता चर्च विश्वास
जापानी शब्द शिबाराकू कसरी प्रयोग गर्ने
सोयाबीन (ग्लिसिन अधिकतम) - अद्भुत सोयाबीन को संयंत्र इतिहास
के गोल्फ क्लबको लागि एक उद्योग वाइड मानक लम्बाई छ?
के के मोटरसाइकिलको लागि के हो?
'द ग्रेट ग्याट्सबी' बाट कस्तो अनुकूलन गरियो? के चलचित्र छ?
ओजोन: राम्रो र खराब ओजोन
'विजार्ड ओज' आत्महत्या को कथा
जापानी भाषामा हन्टो मतलब छ?
दया देखाउने 10 तरिका
महाराष्ट्र माइग्रेशन, कोट विश्वमा लामो समयसम्म माइग्रेशन दोहोर्याउनुहोस्
24 (?) टेनिस बल्सको प्रकार
बहुवचन रूपान्तरण फारमहरू
टाइमलाइन: लर्निंग स्कूल को माध्यम ले Undergrad मा
जर्मन प्लुलल अनुकरणहरूको बारेमा सिक्नुहोस् -न -न-अन्त्यमा
Pitts को प्रकार: पर्वतारोही माध्यमिक लंगर को लागि Pitons को उपयोग गर्नुहोस
इन्डोर साईक्लिङ्ग क्लासमा के हुन्छ?
मईमा जर्मन छुट्टियाँ र सीमा शुल्क
जापानी मा Saikou को अर्थ